Spamer Referrer lagu sharaxay Khabiirka Xoogsatada ah iyo Sida Loo Xakamayn Karo Xeerarka Fudud
Haddii aad tahay bogga internetka xirfadlaha ah ama injineerna software iyo daryeelka ee ku saabsan xogta website-yada / falanqeynta macluumaadka, waxaad u badan tahay inaad ka ogtahay Google Analytics, Open Analytics, Piwik Analytics iyo shabakadaha ururinta macluumaadka iyo falanqaynta. Haddii aad ogaato in qaar ka mid ah gaadiidka qariibka ah iyo kuwa martida ah ay ka muuqdaan goobaha gudbinta sida sida buttons-for-websites.com, darodar.com, iyo ugu fiican- seo -solution.com, waa inaad fiiro gaar ah u leedahay hagaajinta tayada gaadiidkaaga
Artem Abgarian, oo ah Maamulaha Guusha Macaamiilka Sare Semt , ayaa halkan ku sharraxaya arrimo wax ku ool ah oo ku saabsan arrintan
Warqadda Referrer Explained
Best-seo-solution.com, 100dollars-seo - ego one mega vt clearomizer.com, iyo darodar.com waa gudbin bogaga internetka. Dhammaantood waxay xayeysiiyaan badeecadahooda iyo adeegyadooda interneetka, iyo waxka ugu dhibta badan waxay bixiyaan adeegyadooda raqiis. Si kastaba ha noqotee, adeegyadooda lama hubo, shabakadahani waxay ujeedadoodu tahay inay kuu soo diraan gaadiid been abuur ah oo boqolkiiba boqol ah boqolkiiba boqol ah. Sida aad arki karto, dhammaantood waxay ku jiraan bogga ugu horreeya ee mashiinnada raadinta . Taasi waa sababta oo ah goobahaasi waxay khiyaameeyaan xisaabta Google Analytics
1. Xaddiga 100% Boodka - waxay caadi ahaan booqdaan boggagaaga waxayna tagaan waqti aan waqti lahayn. Taasina waa sababta aad boggaaga ujirto xajmigeedu yahay 100% maaddaama martida aysan marnaba daneynin mawduucaaga, muuqaalka boggaaga, iyo adeegyadeeda..
2. Isticmaal xad-dhaaf ah ee Sub-Domains - website-yadaasi waxay isticmaalaan tiro badan oo ka mid ah sub-domains si ay ula socdaan labadaba Google Analytics iyo macaamiishooda. Waxay ku lug leeyihiin waxqabadka spamming waxayna ku xadgudbaan macaamiisha iyagoo burburinaya goobahooda iyagoo raacaya taraafikada.
Falanqaynta Gaadiidka Gaadiidka ee Gaariga Gaariga ee URL
Suurtagal ma ahan in dhamaanteen aan ku falanqeyno ilaha taraafikada iyo URL-yada xariirka ee loo gudbiyo. Habka ugu fiican, si kastaba ha ahaatee, waa inuu abuuro dhowr Filters oo ku jira qaybta Qaybinta Qaybta cusub. Ma jiraan xeerar iyo sharciyo adag oo ay tahay inaad raacdo sida cinwaannada IP-ga ee spamerayaasha gudbinta sii wadaan inay isbedelaan maalin kasta. Waxay u egtahay in spamiyayaashu ay maalgashadaan lacag badan iyo waqti ganacsi si ay ugu gudbiyaan boggaga internetka ee ugu macquulsan.
Xayiraadda soo celinta Spam ee leh Apache. Xeerka Xeerka
Haddii aad ku jirtid serverka Apache, waxaad raaci kartaa xeerarka .htaccss for joojinta spam ka muujinaysaa diiwaanadaada. Isla markaa, waa inaadan iloobin in ay baddalaan xiriirada soo gudbinta ka dib labo illaa saddex bilood. Xeerarka waxaa kaloo loo cusbooneysiiyaa si wakhti ah, markaa waa inaad raacdaa cusbooneysiinta si aad fikrad uga hesho sharciyada xaadirka ah ee hadda jira.
Si ka duwan sida darrada.com, videos-for-your-business.com wuxuu bixiyaa adeegyo wax soo saarka muuqaalka macaamiisha caalamiga ah. Waxaa jira fursado ah in ay tahay adeeg sharci ah, laakiin sababtoo ah taariikhdooda qaaliga ah, waa inaadan khatar gelin khadka website-kaaga.
Abuuri Muuqaal Muuqaal Soodhaf ah
Haddii aadan rabin inaad isticmaasho qawaaniinta fayaqabka sababtoo ah calaamadaha khaldan, waxaad abuuri kartaa aragtida faylasha spam gudbinta. Filtersaalkani waxay kaa caawinayaan inaad si fiican u xayeysiiso spam gudbinta. Waa inaad tagtaa Qaybta Eegida oo aad eegto Filters option. Halkan waa inaad gelisid lambar khaas ah oo ha ka dheeraanin dhererka 255 jilaa.
Ka saar Hits oo laga soo qaado Spiders iyo Bots
Mid ka mid ah qalabka ugu quruxda badan ee nagu caawinaya in aan la dagaallanno sir-doonka gudbinta wuxuu ku dhex jiraa xisaabta Google Analytics. Waa inaad hawlgelisaa xulashada Bot Filtering, kaas oo kaa caawin doona inaad ka takhalusto hiddaha caarada oo dhan iyo xargaha qaybta View.